सुनामसँगको सत्सङ्ग [ती दिनहरु–४ ] – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ मंसिर १३, शनिबार ११:२८ गते
सुनाम दवाडी बोल्न नसक्दैमा प्रतिभाविहीन थिएन । मनको असाध्यै चनाखो र व्यवहारले बाठो पनि थियो ।
जुन दिन सुनाम दवाडी कालिका बोर्डिङ स्कुलको ’प्ले ग्रुप’ मा भर्ना हुन आयो, मैले मेरो काँधमा नितान्त फरक जिम्मेवारी र दायित्व महसुस गरेँ । बच्चो असाध्यै स्वस्थकर, स्फूर्त र चञ्चल स्वभावको भएर पनि बोल्न सक्दैनथ्यो । ‘कति सुन्दर बच्चो !’ मैले धेरै कुराहरु सोचेँ । “परमेश्वरका हातहरुले उसको जीवन निर्माणमा आफ्नो सबै सीप र दक्षता लगाएर पनि उसलाई बोल्ने क्षमता प्रदान गर्न किन भूल गरे होलान् भन्ने मनमा अनगिन्ती विचारहरु आइरहे ।
कालिका बोर्डिङ स्कुलमा ऊ विद्यार्थीको रुपमा दर्ता भएपश्चात् मभित्र एउटा फरक मनोविज्ञानले प्रवेश पायो । स्कुलको प्राङ्गणभित्र मेरा पाइलाहरुले प्रवेश पाउनासाथै आँखाहरुले भने उसैलाई खोजी गर्न थाले ।
सलक्क परेको जीउडाल । कसिलो अनुहार । चिटिक्क सुहाएको स्कुल ड्रेस र धेरै कुराहरु भन्न खोजिरहेजस्तो लाग्ने उसको ‘बडी ल्याङ्वेज’ बुझ्न र जान्न कयौँ प्रयास गरेँ तर निःशब्द…। उसको अन्तरनिहित क्षमता र प्रतिभाको उत्खनन त योग्य कलाकारबाट मात्रै सम्भव हुने विषय थियो । कुनै पत्थरभित्र निश्चित अनुहारको मूर्ति विद्यमान छ भन्ने जानकारी त सक्षम हृदयभित्रका कलाकारी आँखाहरुले मात्रै अनुभूत गर्न सक्दथे । आजीवन शिक्षण क्षेत्रमा संलग्न रहेर पनि त्यस ‘सुनाम दवाडी’ नामको बच्चाको विशेष रुपान्तरणको दिशामा भने म अक्षमजस्तै बनेको थिएँ ।
उसलाई सिकाउने भाषा, तरिका र सीप नितान्त फरक हुन्छ भन्ने जानेर पनि कालिका बोर्डिङ स्कुलको जेनेरल वार्डमै अरु बच्चाहरुसरह कक्षाभित्र राखेर अध्यापन गरिनु उचित थिएन । अभिभावकको विशेष जोड÷प्रयत्नले सुनाम दवाडीलाई त्यस स्कुलमा भर्ना गर्न बाध्य भएको थिएँ । ‘बाध्यता’ शब्दले मात्रै पनि भविष्यको ‘सुनाम दवाडी’ले मेरो प्रशासकीय निर्णयलाई क्षमा गर्न नसक्ला भन्ने मभित्रको आशङ्काले मलाई पटकपटक पिरोलिरहेको थियो, त्यसैले पनि सुनाम दवाडीका पिता नारायण दवाडी र आमा सुमित्रा दवाडीलाई मेरो कार्यालय कक्षमा निमन्त्रण गरी विषयप्रति गम्भीर हुन र उससँग मिल्दो र सम्बन्धित स्कुलमा स्थानान्तरण गर्न पटकपटक अनुरोध गरिरहेँ ।
अभिभावकहरुले सुनाम दवाडीलाई पढिरहेको कक्षाबाट निकाल्न चाहेनन् । उसले नर्सरी कक्षा पूरा ग¥यो, एल केजी कक्षा पूरा ग¥यो र क्रमशः दुई, तीन कक्षाको औपचारिक पढाइ पनि पूरा ग¥यो । उसले जान्नुपर्ने कति जान्यो, जान्नुपर्ने कति थियो, त्यो विषय गौण रहेर पनि मैले धेरै कुराहरु सुनाम दवाडीबाट सिक्दै र जान्दै रहेँ, मानौँ म सुनामको चेलो थिएँ ।
इशाराले बोल्नुपर्ने सुनामले मसँग अनुहारले बोल्न लागेको थियो । सामान्यतः मेरो विचारमा ऊ श्रवण शक्तिमा कमजोर थियो । कक्षामा शिक्षकहरुले पढाएको स्वर र आवाजलाई सुन्न सक्ने उसको अवस्था थिएन । म उसको कक्षा अवलोकन र परीक्षामा पटकपटक पुगिरहँदा मैले बोलेको कुरालाई मेरो ओठ चलेकै भरमा उसले कसरी बुझेको थियो ? मेरै निम्ति परीक्षा बनेर आउने गर्दथ्यो । कक्षा ४ सम्म आइपुग्दा सबै साथीहरुमाथि उसको प्रशासनिक नियन्त्रण कायम रह्यो । ऊ कक्षाको मनिटर बनाइयो । बेलाबखत हुन जाने शिक्षकको अनुपस्थितिले रिक्त रहेका पिरियडहरुलाई उसका निर्देशन र आदेशहरुले चलाए, सबै साथीहरुले उसका नियमहरुको अनुसरण गरे ।
बेलाबखत उसको कठोर रबैयाले गर्दा अप्ठ्यारो पर्न गएका उजुरीहरु पनि उसका केही साथीहरुले नल्याएका भने होइनन्, तर सुनाम दवाडी वास्तविकतामा सटीक थियो र सही हुने गर्दथ्यो । सबैलाई आवश्यकताअनुसार माया र हेरचाह पनि गर्दथ्यो । उसलाई परीक्षाको औपचारिक मापदण्डभित्र अलमलाएर फेल गर्ने काम पनि गरिएन । ऊ निरन्तर कक्षाहरु उक्लिँदै गयो । साथीहरु पनि उससँगै कक्षाहरु चढ्दै गए । सुनाम दवाडीले सबैको स्नेह, आदर र ममता प्राप्त गर्दै रह्यो ।
सुनामले गर्नुपर्ने आफ्ना सबै कामहरु गर्दथ्यो । ऊ इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ हुँदै गयो । उसका अभिभावकलाई काम र कर्तव्यपथमा लागिरहन सदा नेतृत्वदायी प्रेरणा दिइरह्यो । कहिल्यै कक्षामा ढिलो भएन । नियम उल्लङ्घन गरी समय तालिकालाई तोडी सुनामले कक्षा छोडेर भागेन । नियम र अनुशासनमा अविचलित तवरले अडिग रह्यो ।
कक्षा ५ मा पढ्दै गरेकी छात्रा बिरामी परेकीले अफिसमा ल्याइएकी थिई । ऊ सुनाम दवाडी पढ्ने कक्षाकै विद्यार्थी थिई । कमला सिस्टरसँगसँगै त्यसदिन बिरामी छात्राको ब्याग लिएर सुनाम पनि अफिसमा आएको थियो । सुनामलाई मैले मेरो नजिकैको मेचमा बस्न अनुमति दिएँ । उसको अनुहारमा मीठो मुस्कान छरियो । खुसी हुँदै सुनाम मेचमा बस्यो । मैले बिरामी छात्रालाई ‘के भयो छोरी ?’ भनी सोधेंँ । छात्राले ‘पेट दुखेको छ सर’ भनी उत्तर दिई । छात्रा बिरामी भएकी थिई तर किन किन सुनामले नै बढी मेरो ध्यान खिचिरहेको थियो ? मलाई थाहा थिएन ।
पेट दुख्यो भने आफ्नो पीडा व्यक्त गर्न सुनामले कति अप्ठेरो झेल्नुपर्दो हो । उसभित्र कति धेरै भन्न मन लागेका विषयहरु होलान् । कक्षाका साथीहरुले उसमाथि अन्याय पनि त गर्दा हुन् । मनभित्र उब्जिएका ती सबै किसिमका भावहरुलाई दबाएर बस्न बाध्य हुँदो हो, सुनाम !
अनुहार मास्तिरदेखि उसको कपाल सुमसुमाएर उसले बुझ्ने गरी प्रेमको भाषा बोलेको थिएँ मैले । मेरो भाषा बुझेर होला ऊ मुस्कुरायो । बाटोघाटोमा भेट हुँदा सुनामले मलाई आदरपूर्वक अभिनन्दन गर्दथ्यो । दाहिने हातलाई छातीमा राखेर ऊ टक्क उभिन्थ्यो । मेरानिम्ति उसले टक्र्याएको अभिनन्दन थियो त्यो । मैले पनि मुसुक्क खुसीको अनुहारले उसको अभिनन्दनलाई स्वीकारी रहेँ ।
म कार्यकक्षमा व्यस्त भइरहेको समयमा अचानक कमला सिस्टरको साथमा सुनाम दवाडी पनि आएको थियो । उसको अनुहार मलिनो थियो । आँखाहरु रसिला थिए । सामान्य खोकी र मन्द ज्वरो थियो । ज्वरो छामेँ र कपाल सुमसुमाएँ । उसले अवश्य मबाट प्रेमको अनुभूति गरेको हुँदो हो । एउटा सिटामोल चक्की र पानी उसलाई दिएँ । ऊ असाध्यै खुसी देखियो । ‘प्रेम’ युनिभर्सल ल्याङ्वेज रहेछ । सबैले बुझ्ने भाषा ‘प्रेम’ । सबैलाई मन पर्ने भाषा ‘प्रेम’ । तत्काल मेरो मनमा एउटा तरङ्गले पवेश पायो । “धेरै विद्यार्थीहरुलाई कुटेको थिएँ । लौरो लगाएको थिएँ । कयौँपटक लौराहरु पनि भाँचिएका थिएँ, तर ‘प्रेम’पूर्वक चुटेको थिएँ ।
मेरो चुटाइकै कारणले पनि धेरै प्रतिभाशाली ‘अधम’हरुको पर्खाइमा ‘लगन’ जुटेको थियो, तर मैले ‘प्रेम’को नाममा जे किसिमको यातना दिएको थिएँ, त्यसको विस्तृत समीक्षा मेरा चेलाहरुले नै गर्नेछन् । जिम्मा चेलाहरुकै हो तर म यतिखेर एउटा कुरा निश्चिन्त भन्न सक्छु कि विद्यार्थीलाई दिइने भौतिक सजाय नितान्त सर्म दिने व्यवहार हो ।
२५ वर्षको अन्तरालमा शैक्षिक माहोल धेरै परिवर्तन भएको छ । अध्यापन गर्ने समय सकिएको छ । ‘प्रेम’को भाषा चाहिएको छ । प्रेरणा र आत्मबलको अभिवृद्धि गर्ने कला चाहिएको छ ।
सुनामसँग मेरो १२ र १३ वर्षसम्मको लामो सान्निध्यले मलाई धेरै पाठहरु पढाएको थियो । मैले अवश्य पनि आफूलाई सबल र स्वाभिमानपूर्वक जीवन जिउन सक्ने मान्छे बनाएको थिएँ । सबैबाट सम्मान र प्रतिष्ठा आर्जन गरेको थिएँ । सबैलाई सम्मान र प्रतिष्ठा दिन सिकेको थिएँ ।
उसका पिता नारायण दवाडीलाई कक्षा ९ को रजिष्ट्रेसन फाराम भर्ने समयमा पनि मैले अन्तिमपटक सूचना गरेको थिएँ कि उसले सम्भव भएसम्म अझै पनि प्राविधिक विषयमा भर्ना हुन जाओस्, तर अभिभावक र उसका मामाले समेत ऊ जुन बाटोबाट हिँडेर त्यहाँसम्म आइपुगेको हो त्यही बाटोबाट नै गन्तव्यलाई पछ्याओस् भन्ने आशय व्यक्त गरे । सुनाम दवाडी मुखले नबोलेर पनि आशयले धेरै कुराहरु भनिरहेको हुन्थ्यो । म उसलाई बुझ्न धेरै किसिमले प्रयत्न गरिरहन्थेँ, तर कतिपय अवस्थामा मेरा प्रयत्नहरु असफल भइरहे ।
सुनामको कक्षाबाहिर झ्यालनजिकै उभिएर सुनामलाई जान्न लाखौँ प्रयासहरु गरेँ । सुनामको अनुहार प्रफुल्ल रहँदा मेरो दैनिकी पनि प्रफुल्ल व्यतीत हुँदै गयो । सुनाम मानौँ, मेरो संवेदना मापनको एउटा उपकरण थियो । उसको अनुहारले बेचैनीको लक्षण देखाए तुरून्तै उसको अनुहारको बादलले मेरो अनुहारलाई पनि उदास उदास बनाइदिन्थे । मैले मभित्रको सुनाम दवाडी र मेरो विस्तृत सम्बन्धको गहिरो संवेदनालाई कहिल्यै पनि कसैका सामु चर्चाको विषय बनाइनँ । सुनाम दवाडीलाई भनिरहेँ कि ‘आजको दिन कस्तो छ, सुनाम ?’ उसले पनि उसको आफ्नै भाषामा निरन्तर भनिरह्यो, ‘आजको दिन विशेष छ, सर !’
मेरो सोधाइले आएको उसको उत्तरलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र मैले सुनामलाई विश्वास र भर गर्न सकिनँ । उसभित्र विद्यमान अनेक रहरहरुका थुप्रै अभिव्यक्त हुने इच्छाहरुलाई उसले दबाएर बसेको होला भन्ने आशङ्काले मलाई सोच्न लगाए । त्यस्ता विभिन्न अवस्थाहरुमा म सुनाम दवाडीभैmँं निःशब्द र निरूत्तर भइरहेँ । जीवन भोगाइको अनन्त शृङ्खलाका बीच सुनामसितको मेरो सत्सङ्ग एउटा अविस्मरणीय परिघटना हो । शुभ मङ्गलम् !!